မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါစေ.... | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » ဆောင်းပါး » မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါစေ....
“ သူငယ်ချင်း အလှူငွေလေးထည့်ပါဦး ၊ တတ်အားသ၍ပေါ့…”
ကုတင်ပေါ်မှာ လှဲနေသော မျိုးကိုကိုက အိပ်ယာထဲမှ ထသည်..။ နံရံတွင် ချိတ်ထားသော ကုတ် အကျီင်္ အိတ်ကို စမ်းရင်း ပြန်ပြောသည်.။
“ အင်းသူငယ်ချင်း ထည့်မယ်လေ..ရူဘယ် (၂၀၀) ထည့်မယ် ၊ ဒါနဲ့ဘာအတွက်လဲ သူငယ်ချင်း ..”
“ ရွှေစင်မင်း သီလရှင်သင် ပရဟိတ ဂေဟာအတွက်ပါသူငယ်ချင်း ၊အဲဒီမှာ မိဘမဲ့ ၁၂ နှစ်အောက် ကလေး ငယ် တွေနဲ့.. သီလရှင်ဆရာလေးတွေ ကို လှူဒါန်းဖို့ပါ. စုစုပေါင်း ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား ပညာသင်(၅၂၀) ရှိပြီးတော့ ၊ အပြင် က ပညာသင်တဲ့သီလရှင် ဆရာလေး (၃၁၅)ပါးရှိတယ်.၊ကိုရင်လေး အပါး(၈၀) ရှိပါတယ်သူငယ်ချင်း.”
“ အော်..အင်းသူငယ်ချင်း.. အဲဒါက ဘယ်မှာရှိတာလဲ.”
“ အင်း ပြင်ဦးလွင်မှာပါသူငယ်ချင်း.. ရပ်ကွက်ကြီး(၁)၊၁၃ညံကွဲရပ်ကွက်၊ မှာပါ…၊ ပြင်ဦးလွင်ကစည်ပေမယ့် အဲဒီနေရာက တော်တော်ကို ချောင်ကျ တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အပြင် အလှူရှင်တွေရှားပါးတဲ့အတွက် အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်.။ သူတို့အတွက်တစ်ရက် စားသောက်ရေး ကုန်ကျမှုက ပျမ်းမျှ အားဖြင့် ဆန် ၄ အိတ် နဲ့ ဆီ ၂ ပိဿာလောက် ကုန်ကျပါတယ်.။ ပြင်ဦးလွင်ဆိုတော့ကွာ. ဟင်းသီးဟင်းရွက်တော့ပေါတာပေါ့.။ ဒါပေမယ့် ဆန်၊ဆီ၊ ဆား အစရှိတာတွေ ရှားလွန်းတဲ့အခါကျတော့ မလုံလောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်.။ အဲဒီနေရာလေးကို ငါတို့ စိမ်း လန်းမြေ က လှူချင်လို့ပါ…”
“ အေး သူငယ်ချင်း.ငါစိတ်ဝင်စားသွားပြီကွ.။ မင်း အလုပ်မများဘူးဆိုရင်ငါ့ကို စိမ်းလန်းမြေ အကြောင်းနဲနဲ ရှင်းပြပါလား.”
“ အင်းသူငယ်ချင်း. ငါအားပါတယ်.။ မင်းဒီလို စိတ်ဝင်စားလို့ ငါအရမ်းဝမ်းသာပါတယ်.။ကျန်တဲ့သူငယ် ချင်း တော်တော်များများက အလှူငွေကောက်တဲ့အခါ ဘာကြောင့်လှူတယ်.၊ ဘယ်ကိုလှူတယ်ဆိုတာကို စိတ်မ၀င်စားကြဘူး. ၊ ပြီးပြီးရောဆိုပြီး အလှူငွေထည့်လိုက်ကြတာများတယ်.၊ ငါတို့က လစဉ်လတိုင်း အလှူငွေတွေကောက်ပြီးတော့ ဘယ် ကို လှူဒါန်းတယ်ဆိုတာ မသိလိုက်ကြဘူးလေ.”
“ စိမ်းလန်းမြေက စတည်ထောင်ကတည်းက ရည်ရွယ်ချက်ကြီး(၃) ခုနဲ့ပေါ့ကွာ..။ အဲဒါတွေကတော့ …
(၁)ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရန် လိုအပ်သူများအတွက် ထိရောက် သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများပေးရန်၊
(၂)ပညာကို လိုလားပါလျက် မတတ်နိုင်သူများအတွက် ကောင်းမွန်သော ပညာရေးစောင့်ရှောက်မှုများပေးရန်၊
(၃)"ဥတုရာသီ တောကိုမှီ" သဖြင့် သစ်ပင်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးခြင်းများ ပြုလုပ်ကြရန်၊ ဆိုပြီးတော့ပေါ့ သူငယ်ချင်းရာ..”
“ ဟုတ်လား..သိပ်ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပဲသူငယ်ချင်း.မင်းတို့ ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲ ဘာတွေ ဆက် လုပ် ဖို့ ရှိလဲ ဆိုတာ ဆက်ရှင်းပြပါဦးကွာ..”
ကျွန်တော့် မျိုးကိုကိုကို လွန်ခဲ့သော နှစ်များအတွင်း စိမ်းလန်းမြေ စတင် ဖြစ် ပေါ်လာ ပုံကို ဆက် တိုက် ရှင်း ပြ ဖြစ်ခဲ့သည်.။
စိမ်းလန်းမြေရဲ့ အစ ...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့၊ မြို့လယ်လမ်းဆုံမှ ဖောင်ကြီးမြို့သို့ သွယ်တန်းထားသော ကတ္တရာခင်းလမ်းလေး၏ အလယ်လောက်နေရာ တွင် လှည်းကူးမြို့ဆီလည်းမမီ ဖောင်ကြီးမြို့သို့ လည်းမနီးပဲ ညောင်တုန်း ဟု အမည်ရသော ရွာလေးတည်ရှိနေ၏။ ထိုရွာလေးအနီး အင်ကြင်း တောင်ခြေတွင် မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ စီးပွားရှာ ခဲ့သော ထိုင်ဝမ်တရုတ် သူဌေးတစ်ဦးက မြေဧကများစွာ ဝယ်ယူပြီး မိဘမဲ့ကလေးငယ် များ အတွက် ပရဟိတကျောင်းတစ်ကျောင်း တည်ပေးခဲ့လေသည်။ ထိုကျောင်း လေးမှာ "မြန်မာ စိမ်းလန်းမြေ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပရဟိတ ဂေဟာ" ဟု အမည်တွင် လေသည်။ တရုတ်သူဌေး ပြည်တော်အပြန်တွင် ထိုကျောင်း လေးမှာထောက်ပံ့ပေး မည့်သူမဲ့စွာ အခက်ကြုံရရှာတော့သည်။
ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးမှနေ၍ နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မှ ဆရာကြီး ဦးလှမိုးအား ဖွင့်ဟတိုင်ပင်ရင်း အကူအညီတောင်းခံခဲ့ရာ လစဉ်တိုင်း အတွက် ကျပ်၈သိန်းဖြင့် ခက်ခက်ခဲခဲ လည်ပတ်နိုင်ခဲ့ပြန်သည်။ သို့ရာတွင် ကျောင်းမှ ကလေးငယ်များ ဖျားနာမှုများအတွက် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ထိထိရောက်ရောက် ပေးနိုင်ရန် မလွယ်ကူခဲ့ပေ။ မြို့နှင့် ဝေးလွန်းလှသဖြင့် မည်သူကမျှလည်း ထိုကျောင်းသို့ မလာလိုခဲ့ကြ။ ထို့ကြောင့်ပင် ဆရာကြီးဦးလှမိုးမှ ကမ်းလှမ်းဖိတ်ခေါ်စကား ဆိုလာ သောအခါ ဆရာဝန်လူငယ် ကိုစိုင်းကလူငယ်ပီပီ စိတ်အားတက်ကြွ စွာဖြင့် သမားကောင်း စိတ်ဓာတ်ကိုပြကာ လက်ခံကုသပေးဖို့ တာဝန်ယူလိုက် လေသည်။
အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ထိုကျောင်းကလေးဆီ သွားရောက်ပြီး ဆေးကုသမှု ပေးခဲ့ရာတွင် ထိုကျောင်းမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ သာမက ရွာထဲမှလူနာများ၊ ထိုမှတဆင့် ရွာနီးချုပ်စပ်မှ လူနာများပါ အားကိုး တကြီးဖြင့် လာရောက်ခဲ့ကြသည်။ သမားကောင်းစိတ်ဓာတ်ဖြင့် နာဖျားနေသော လူနာများကို မပစ်ပယ် ရက်သော ကိုစိုင်းတစ်ယောက် အကြီးအကျယ် အခက်ကြုံရလေပြီ။ သူ့အတွက် ပံ့ပို့ပေးထားသော ဆေး ပစ္စည်းများက ကျောင်းမှကလေးများကို ကုသရန်အတွက်သာ ဖြစ်သဖြင့် မလုံလောက်နိုင်တော့ပေ။ ထို့ကြောင့် ဆရာကြီးဦးလှမိုးထံ မည်သည့် ဆေးဝါးမှ ထောက်ပံ့ပေးရန်မလို၊ မိမိက လူအားသာမက ဆေးဝါးပါ စိုက်ထုတ်၍ ကုသပေးပါမည်၊ ရွာသူရွာသားများကိုပါ ကုသခွင့်ပြုပါဟု ခွင့်ပန်လိုက်ပြီး လူအား သာမက ဆေးဝါးများပါ စိုက်ထုတ်ကုသ ပေးခဲ့ လေ၏။
တစ်ပတ်တစ်ရက်ဖွင့်သော ကိုစိုင်း၏ ဆေးခန်းလေးက ထိုအနီးနား ရွာနီးချုပ်စပ်၏ အားကိုးရာဖြစ်လာသဖြင့် တစ်ယောက်တည်းနှင့် မည်သို့မျှ မနိုင်နိုင်တော့။ လူနာနှင့်ဆရာဝန် အားမျှနိုင်ဖို့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကိုညီကို အကူအညီတောင်းခံ ခဲ့ရတော့သည်။ သမားကောင်း ပီသခဲ့ကြသော သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သားတို့ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း လူနာများနှင့် မမောနိုင်၊ မပမ်းနိုင် လုံးပမ်းရင်း ကုသပေးခဲ့ကြ၏။ ထိုသို့ ကုသ ပေးရန်အတွက် သူတို့သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်၏ ပုံမှန်ဆေးခန်းထိုင် ဝင်ငွေသာမက၊ မုန့်ဖိုးများပါ စိုက်ထုတ်ထည့်သွင်း ခဲ့ကြရသည်။ သို့သော် လည်း မြို့ဆေးခန်းများနှင့် အလှမ်းဝေးလှသော ကျေးလက်နေ ရွာသူ ရွာသားများ၏ အားကိုးအားထားမှုများကြားမှာ သူတို့နှစ်ယောက်၏အား များကလည်းလုံလောက်မှု မရှိနိုင်ခဲ့။ ထို့ကြောင့် မိခင်ကျောင်းတော်သို့ ပြန်သွားကာ အခြေအနေကို ပြောပြရင်း တတ်အားသမျှ ကူညီဖို့ပြောခဲ့ရာ ကျောင်းမပြီးသေးသော ဆရာဝန်လောင်းလေးများက ငွေအား၊ လူအားဖြင့် တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်ကူညီပေး ခဲ့ကြသည်။ ၄င်းဆရာဝန်လောင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပြီး တခြားသော ကျောင်း၊ တက္ကသိုလ် အသီးသီးမှလည်း စေတနာရှင် ကျောင်းသူကျောင်းသား ကြယ်ပွင့်များ အစင်းစင်း လင်းလက် လာသော အခါတွင် ကိုစိုင်းစတင်ခဲ့သော ဆေးခန်းလေးမှာ ငွေအား၊ လူအား ပြည့်စုံစွာဖြင့် လည်ပတ်နိုင်ခဲ့တော့သည်။
ငွေအား၊ လူအား တောင့်တင်းလာပြီးနောက်တွင် ပရဟိတစိတ်ဓာတ်တို့ ထက်သန်သော လူငယ်များပီပီ အခြားသော ပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုပါ အဖွဲ့လေးဖွဲ့ပြီး လုပ်ဆောင်လိုစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြသည်။ သို့ဖြင့် လိုအပ်သောနေရာတွင်၊ လိုအပ်သောသူအတွက်၊ လိုအပ်သောအရာကို တတ်အားသမျှ ပေးစွမ်းချင်ကြသော စိတ်ဓာတ်တို့ ထပ်တူကျချိန်တွင် ပရဟိတ အဖွဲ့လေးတစ်ခု စတင်တည်ထောင် ဖြစ်ကြသည်။ "မြန်မာစိမ်းလန်းမြေ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပရဟိတဂေဟာ" မှ စတင်ခဲ့သဖြင့် စိမ်းလန်းမြေဟုပင် အမည်ပေး ခဲ့ ကြသည်။
အင်ကြင်းတောင်အခြေက "မြန်မာစိမ်းလန်းမြေ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပရဟိတဂေဟာ"
စိမ်းလန်းမြေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်များ …
ထိုအဖွဲ့လေးက အထူးတလည် ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်များမှာ
(၁)ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရန် လိုအပ်သူများအတွက် ထိရောက် သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ပေးရန်၊
(၂)ပညာကို လိုလားပါလျက် မတတ်နိုင်သူများအတွက် ကောင်းမွန်သော ပညာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ပေးရန်၊
(၃)"ဥတုရာသီ တောကိုမှီ" သဖြင့် သစ်ပင်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးခြင်းများ ပြုလုပ်ကြရန်၊ ဟူ၍ သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။
စိမ်းလန်းမြေရဲ့ ပထမ ခြေလှမ်း …
စိမ်းလန်းမြေအဖွဲ့ အသစ်စက်စက်လေးသည် တစ်ခုသောနေ့ရက်မှာ အမှန်တကယ်ပင် စတင်သက်ဝင် လှုပ်ရှား လာခဲ့တော့၏။ " မြန်မာ စိမ်းလန်းမြေ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပရဟိတဂေဟာ " တည်ရှိရာ ညောင်တုန်း ရွာအနီး အင်ကြင်းတောင်ကြီးမှ ခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းများကို ရှင်းလင်းပြီး အရိပ်ရအပင်များကို စိုက်ပျိုးခဲ့ကြသော နေ့လေးပင် ဖြစ်တော့သည်။ အင်ကြင်းတောင်ပေါ်ရှိ ခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းတို့ကြောင့် မြွေအန္တရာယ်၊ နွေကာလတွင် မီးဘေး အန္တရာယ်များ စိုးရိမ်ရသဖြင့် အခကြေးငွေပေးပြီး ရှင်းလင်းရန် ဆရာကြီးဦးလှမိုးမှ စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း အဆင်မပြေခဲ့။ ထို့ကြောင့် စိမ်းလန်းမြေ မောင်နှမများမှ ဦးစီးကာ ညောင်တုန်းရွာတွင်း ဆေးကုဆင်းရင်းမှ အရိပ်ရအပင်များ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုပုံ အကြောင်း တစ်အိမ်တက်ဆင်း ဆွေးနွေးရှင်းပြ အကူညီ တောင်းခံခဲ့ ကြသည်။" စေတနာသည် ရောင်ပြန်ဟပ်မြဲဖြစ်၏ " ဟူသော ဆိုရိုး စကားသည် တကယ်လက်တွေ့ကြုံစဉ်တွင် ကြက်သီးထသည်အထိ ကြည်နူးဝမ်းသာစေခဲ့လေ၏။ အကူအညီ တောင်းခံထားသော နေ့ရက် မှာတွင် ရွာလုံးကျွတ်မျှ အဘိုးအဘွားများပါ မနေကြပဲ အကူအညီပေးရန် လာရောက်ခဲ့ကြသည်။ ဤအဖွဲ့လေး၏ကျေးဇူးကို တပြန်တလှည့် ဆပ်ခွင့် ရချင်နေကြရှာသော အဘိုးအဘွားတို့ကို တောင်းပန်ပြီး လုပ်အားပေး လာသောအဖွဲ့များကို ကျွေးမွေးရန်အတွက် ချက်ပြုတ်နေသည့် နေရာ တွင်သာ ကူညီပေးဖို့ရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ကြရသည် အထိပင်။
ယနေ့ စိမ်းလန်းမြေ …
ထိုသို့စတင်ဖြစ်တည်ခဲ့သော စိမ်းလန်းမြေ ပရဟိတအဖွဲ့သည် ယခုအခါ တွင် အဖွဲ့ဝင်အသစ်များ တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်လာကြသဖြင့် မိတ္ထိလာနှင့်၊ရန်ကုန် အဖွဲ့ခွဲ(၁)(၂) စသဖြင့် အဖွဲ့ခွဲများခွဲကာ အကူအညီ လိုအပ်သော နေရာများဆီသို့ ထိထိရောက်ရောက် ထဲထဲဝင်ဝင် အကူအညီပေးနိုင်ရေး ကြိုးစားလုပ်ဆောင်လျက် ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ များ၊ သဘာဝဘေးဒုက္ခ ကျရောက်မှုများကြောင့် ဝမ်းနည်း မျက်ရည် ကျနေသူများ၏ မခြောက်သေးသော မျက်ရည်အချို့ကို တတ်စွမ်းသမျှ တိတ်စေ၊ခြောက်စေ နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် အဖွဲ့ပိုင် အင်တာနက်စာမျက်နှာဖွင့်လှစ်ခါ လုပ်ဆောင်ချက် များကို တင်ပြပေးနိုင်ခဲ့သဖြင့် ပြည်ပမှလည်း အဖွဲ့ဆီသို့ အဖွဲ့ဝင် များအဖြစ် ဝင်ရောက်လာကြရာ စင်္ကာပူအဖွဲ့ခွဲ၊ မလေးရှားအဖွဲ့ခွဲ ၊ဂျပန်အဖွဲ့ခွဲ နှင့် မော်စကို အဖွဲ့ခွဲဟူ၍ ထပ်တိုးပွားများနိုင်ခဲ့သည်။ ရှေ့ဆက်၍လည်း မိမိတို့ ဦးတည် ရည်ရွယ်ထားသည့် အတိုင်း မသွေမဖယ် မတိမ်းမစောင်းစေဘဲ အမိမြေ အတွက် တတ်အားသမျှ ပေးဆပ်ကာ ရှေ့ဆက်နေဦးမည် ဖြစ်သည်။
စိမ်းလန်းမြေ၏ လှူဒါန်းထောက်ပံ့မှု မှန်သမျှသည် အဖြူစင်ဆုံးသော စေတနာများ၏ စီးဆင်းရောင်ပြန် ဟပ်မှုများသာ ဖြစ်ပါသည်။ အလှူ ကိုခုတုံးပြု၍ တစ်စုံတရာရယူလိုမှု စသည့် အနှောင်အဖွဲ့၊ အရောင် အဆင်း လုံးဝ (လုံးဝ) ကင်းစင်သော ပရဟိတစိတ်ဓာတ် စစ်စစ်များဖြင့် လှူဒါန်းမှုများ ဖြစ်ပါသည်။ စိမ်းလန်းမြေ ပရဟိတအဖွဲ့သို့ ဝင်ရောက် ရန်အတွက် ပရဟိတစိတ်ဓာတ် ပြည့်ပြည့်ဝဝရှိရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။ အသွေး အရောင်၊ အဆင့်အတန်း ခွဲခြားခြင်း မရှိဘဲ ၊ အများအကျိုးအတွက် တတ်စွမ်းသမျှ ဆောင်ရွက်လိုသူတိုင်းကို ဝမ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုပါသည် ဆိုသည့်အကြောင်းကို..ကျွန်တော်မျိုးကိုကို ကို တတ်နိုင်သမျှ ရှင်းပြပေးခဲ့သည်.။
“ ငါတကယ်သဘောကျသွားပြီသူငယ်ချင်းရာ ၊ မင်းတို့ ရှေ့ဆက် ပြီးတော့ ရော ဘာတွေဆက်လုပ် သွား ဖို့ရှိသေး လဲ သူငယ်ချင်း ၊ အဖွဲ့ဝင်ကရော ဘယ်လောက်လောက်ရှိနေပြီလဲ ”
“ အင်း သူငယ်ချင်း. အခု တော့ အဖွဲ့ဝင်အင်အား (၆၀၀) ကျော်ရှိနေပြီကွာ.။ ပြီးတော့ ရှေ့ဆက်လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာတွေကတော့ အများကြီးပေါ့ လောလောဆယ် ငါတို့ရဲ့ အနီးဆုံး စီမံကိန်းက ပြင်ဦးလွင် အနီးစခန်း နားမှာ သိန်း(၅၀၀) မတည်ပြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကို အရင်ဆုံးဆောက်ဖို့ရှိပါတယ်သူငယ်ချင်း။ အဲဒီကျောင်းမှာ နောက်ပိုင်းဆိုရင် မူလတန်းကနေ အထက်တန်းအထိ အခမဲ့ ပညာသင်ပေးနိုင်ဖို့ အထိရည်ရွယ်ထားပါတယ်.။ အဲဒီကျောင်းမပြီးခင်မှာလည်း ငါတို့ ဒီနှစ် လုပ်ဆောင်ထားသလို မိတ္ထီလာမှာ အခမဲ့ ပညာသင်ကျောင်း ကို အဆောင်ရော မြေကွက်ပါ ငှားရမ်းပြီး တာဝန်ယူထားတဲ့ဆယ်တန်းကျောင်းသူ ကျောင်းသားပေါင်း (၂၁) ယောက်ရှိပါတယ် ။ အဲဒီထဲက ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေထဲက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း တက္ကသိုလ်ဆက်တက်မယ်ဆိုရင် တက္ကသိုလ်တက်တဲ့အထိပါ တာဝန်ယူမှာပါ သူငယ်ချင်း .”
“ ဟာ မင်းတို့ရဲ့ စီမံကိန်းက အကြီးကြီးပဲနော်..။ တကယ်ကို ပညာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်တာပဲ ၊ လေး စား တယ် သူငယ် ချင်းရာ..၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကရော… ”
“ အင်း သူငယ်ချင်း ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အနေနဲ့ ငါတို့အခုလောလောဆယ် စိမ်းလန်းမြေ ပရဟိတ အခမဲ့ ဆေးကုခန်း(၂)ခု ရှိပါတယ်.။ နောက်ထပ်ပြီး စိမ်းလန်းမြေ အခမဲ့ဆေးရုံကိုပါ ထပ်ပြီးဆောက်သွားဖို့ ရှိပါ တယ် သူငယ်ချင်း.”
“..အရမ်းဝမ်းသာတယ်သူငယ်ချင်းရာ..၊ ရော့ အလှူငွေ (၃၀၀) ထည့်လိုက်မယ်သူငယ်ချင်း.၊ အများကြီးလှူချင်တယ်ကွာ.။ ဒီလ ပစ္စည်းဝယ်လိုက်လို့ပါ.။ နောက်လ နောက်လ တွေကျရင် ငါဒီ ထက်ပိုပြီး လှူမယ်သူငယ်ချင်းရာ..”
“ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်းရာ.. မင်းတို့၊ ငါတို့ လှူဒါန်းတဲ့ပိုက်ဆံတွေက ငိုနေတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ မျက်ရည် တစ်စက် ကို ဖြစ်ဖြစ် တိတ်စေ နိုင်မယ်ဆိုရင် ငါတို့မင်းတို့ လှူဒါန်းရကျိုးနပ်ပါတယ်သူငယ်ချင်းရာ…။ဒီလို စီမံ ကိန်းတွေ မှမဟုတ် ပါ ဘူး.။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်သမျှ ကိစ္စတွေ၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်တွေမှာလည်း မင်းတို့ ငါတို့ ပါဝင် လှူဒါန်းနိုင် ပါ တယ်.။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်သူငယ်ချင်းရာ.. ”
“ ရပါတယ်ကွာ.. ငါတို့လည်း မင်းလို လိုက်ပြီး လုပ်မပေးနိုင်ပေမယ့် ၊ တတ်နိုင်တဲ့ဖက်က ကူညီနိုင်လို့ ၀မ်းသာမိပါတယ်.”
ကျွန်တော် အလှူငွေ ကောက်ပြီး ပြန်လာတော့ ည ၂ နာရီ ထိုးတော့မည်.။ လူက ပေါ့ပါး လန်း ဆန်းနေ သည်။ ကော်ရစ်ဒါကိုဖြတ်တော့ ဟိုးအဝေးက မော်စကိုမီးရောင်များကိုလှမ်းမြင်ရသည်.။
မဝေးတော့ပါ.။ ကျွန်တော်တို့ချစ်သော ကျွန်တော်တို့၏ အမိမြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း ထိုကဲ့သို့တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက် လာပါလိမ့်မည်.။ ထိုသို့တိုးတက်ရာတွင် တိုးတက်တက်မှု နှေးကွေးသော ကျေးလက်ဒေသများနှင့် အခြား သဘာ ၀ဘေး အန္တရာယ် များ ၊ အခက်အခဲများအတွက် စိမ်းလန်းမြေသည်လည်း အမြဲ အဆင်သင့် ရှိနေ ပါလိမ့် မည်.။
မနေ့ကပင် ဒဿမအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးအတွင်း ညီငယ်တာဝန်ခံအသစ်များကို စိမ်းလန်းမြေ တာ ၀န်များ ကို လက်ဆင့်ကမ်း လက်ခံထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည်.။ သူတို့ရဲ့အားအင်တွေက နိုင်ငံ အတွက် တစ်ဖက် တစ် လမ်း မှ ကူညီ ရန် အသင့်ရှိနေကြပြီးဖြစ်သည်.။သူတို့၏အားအင်များဖြင့် စိမ်းလန်းမြေသည်ယခုထက်ပို၍ ပို၍ နိုင်ငံ့အကျိုးကိုဆက်လက် သယ် ပိုးနိုင်ပါလိမ့်မည်..။
ပီတိကြောင့်လား.၊ မော်စကို အအေးဒဏ်ကြောင့်လားမသိ၊ ကျွန်တော် ကြက်သီးဖြန်းကနဲ ထမိလေတော့သည်. ။
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 4:47 PM
Posted by မိုးသက် at 4:47 PM Read more
May Khin January 25, 2013 at 1:49 AM
အိမ်မက်စေရာ January 26, 2013 at 4:44 PM
ဒီလို အကျိုးပြု လုပ်ငန်းတွေက ပြောရလွယ်သလောက် လုပ်ရသိပ်ခက်တယ်..အန်တီလေး မေခင်ပြောသလိုပဲ အိမ်မက်လဲ ထပ်ဆင့် ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ် စိမ်းလန်းမြေလေး တည်တံ့ ခိုင်မြဲ ပါစေကွယ်..ငါ့မောင်ရဲ့ အလှူအတွက်လဲ ပီတိ ဖြစ်သွားမိပါတယ်..
အခုလူငယ်တွေ ပရဟိတ လုပ်ကြတာ တကယ့်ကိုဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းတယ်
မယိုင်မလဲ ခိုင်မြဲသောလက်တွေနဲ့ ထာဝရ တွဲဆက်နိုင်ပါစေဗျာ။